Masinina indostrialy - AOOD Technology Limited
Ny milina indostrialy dia mitana andraikitra lehibe hahatratrarana ny famokarana avo kokoa, ny fahombiazana avo lenta ary ny vidiny ambany. Amin'ireto rafitra indostrialy sarotra ireto, ny fivondronan'ny peratra slip sy ny tonon-taolana rotary dia ampiasaina betsaka hanatanterahana ny asan'ny famindrana herinaratra, data, signal na media avy amin'ny faritra mijanona mankany amin'ny faritra mihodina. Raha ny fahasarotan'ny rafitra dia azo ampidirina ny peratra slip sy ny tonon-taolana.
AOOD dia nanolotra rafitra peratra slip ho an'ny milina indostrialy nandritra ny taona maro. Azonao atao ny mahita ny peratra slip AOOD dia manatanteraka ny asany famindrana herinaratra sy elektronika amin'ny milina fantsom-boaloboka, masinina mifantina sy toerana, milina famonosana, rafitra fikirakirana fitaovana, fitaovam-piadiana robotic, semiconductors, tavoahangy sy fitaovana famenoana, fitaovana fanodinana sakafo, fitaovana fanaraha-maso fantsom-pandrosoana, fanandramana mihodina latabatra, sary enjana, milina fanontana ary milina lehibe hafa. Andao ataontsika voafaritra tsara amin'ny robot, ny robot dia misy ampahany roa lehibe, ny iray dia sandry robotic ary ny iray kosa ny frame fototra.
Ny sandry robotic dia afaka mihodina 360 ° maimaim-poana fa ny frame fototra dia miorina ary mila mandefa herinaratra sy signal avy amin'ny frame fototra mankany amin'ny vondrona fanaraha-maso sandry robotic isika. Eto isika dia tsy maintsy mampiasa peratra slip mba hamahana io olana io tsy misy olan'ny tariby.
AOOD dia mitazona hatrany ny fikarohana sy famolavolana vahaolana momba ny peratra slip. Ny peratra fihodinana AOOD mihodinkodina sy tsy mifandray dia afaka mahatratra ny fifindrana maharitra amin'ny alàlan'ny fandehan-javatra haingam-pandeha, ny peratra fifampikasohana amin'ny mercury dia mety hahatratra ny famindrana avo lenta ankehitriny, toy ny mpampitohy miodina herinaratra AOOD 3000amp ho an'ny milina fantsom-by.
Vokatra mifandraika: Amin'ny alàlan'ny peratra bore slip, Pancake slip slip,Servo Slip an'ny Servo System